ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ တီဗီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Adrian Zaw | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ တီဗီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Adrian Zaw
ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ တီဗီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Adrian Zaw
Posted by kai on Jan 15, 2011 in Contributor, Columnist, Entertainment | 13 comments
တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြန်မာအသင်းဥက္ကဌ ဒေါက်တာဇော်ထွန်းမိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ တီဗီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Adrian Zaw (ကြည်မောင်ဇော်)နှင့်လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မြို့ မွန်ထရီပတ်ခ်မြို့နယ်ရှိ အောင်ဇေခန်းမတွင်၂၀၁၀ဒီဇင်ဘာလ၆ရက်၌ တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၉ခုနှစ်၊ ၅နှစ်သားအရွယ်တွင်မိဘနှင့်အတူ အမေရိကနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိ လာသည့် Adrian Zaw သည် လက်တွေ့’ အမေရိကန်အိပ်မက်’၌ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို မိသားစုနှင့်အတူ ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရပြီး စီးပွားရေးအခြေအနေအရအိမ် ပေါင်းများစွာ ကျောင်းပေါင်းများစွာ ပြောင်းရွှေ့ကာကျောင်းတက်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်သည့်အလျှောက် ငယ်စဉ်ကပင်နေရာဒေသပေါင်းများစွာ၊ သူငယ်ချင်းပေါင်းများစွာနှင့်ပြောင်းလဲ
ဆက်ဆံခဲ့ရသည်။ ထိုအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပင် လူအများနှင့်ဆက်ဆံမှုတွင်အောင်မြင်သူတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုစဉ်အချိန်ကကွန်မြူနတီတွင်မြန်မာလူမျိုးမများသဖြင့်မြန်မာသူငယ်ချင်းမရှိပဲ အိမ်တွင်တီဗီကြည့်ရင်း၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကြည့်ရင်း ငါးပိသံထွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောအဆင့်မှ အဆင့်မှီမေရိကန်သံထွက် အင်္ဂလိပ်စကားအဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ခုနှစ်၊အသက်၁၃နှစ်အရွယ်တွင် သူတက်နေသောကျောင်းသို့ Career Day အတွက် လုပ်ငန်းဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များလာရောက်ဟောပြောကြရာ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက် ဟောပြောသူအမျိုးသမီးကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တဦးအနေဖြင့်ပျော်
ရွှင်စရာကောင်းပုံ၊ ကစားနည်းပေါင်းများစွာကို ကစားရပုံ၊ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွင် အစားအစာများကိုကြိုက်သည့်အချိန်တွင်အခမဲ့စားသုံးရပုံများကို ဟောပြောသွားသည်ကိုကြားရပြီးနောက်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရန်စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်ဆိုပါသည်။
ထိုနှစ်နွေရာသီတွင်သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတက်ရန်အတွက် Scholarship မဲပေါက်ကာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ရုံမျှကကျောင်းတွင်း Speech and Debate (ကျဘန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့်စကားရည်လုပွဲ)တွင် စတင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအတက်တန်းကျောင်းသားဘ၀၌ဆုပေါင်း၆၀ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ၁၀တန်းတွင် League ချန်ပီယံဆုရခဲ့ပြီး၁၁တန်းတွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ချန်ပီယံဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိကာအမေရိကတပြည်လုံးအဆင့်သို့ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဂုဏ်ယူနိုင်ဖွယ်အဆင့်၅နေရာရခဲ့သည်။
အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးနောက်Pasadena City College တွင်သရုပ်ဆောင် နှင့်အသံပိုင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ Scholarshipဖြင့်တက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်လူမျိုးစုအများနေထိုင်ရာOrange County ၏ ရုပ်မြင်သံကြား အသံလွှင့်ဌာနတွင်၃နှစ်ကျော်ကြာသရုပ်ဆောင်နှင့်တီဗီအစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ်တီဗီရှိုးပေါင်းများစွာလည်း ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ အသက်၂၀တွင် USC (University of Southern California) တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေစဉ်ပညာသင်ကြားရေးကိုခေတ္တရပ်
နားကာ Satacracy 88 ရုပ်သံစီးရီးတွင်ဇာတ်ရုပ်Ariel Zim အဖြစ်ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်တွင်၂၀၀၇ခုနှစ်အတွက် Emmy Award for Oustanding Broadband Drama ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ခဲ့သည်။
၆လအကြာတွင်မီဒီယာကုမ္ပဏီသစ်ဖြစ်သောArrow Entertainment ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကေဘယ်လ်တီဗီလိုင်းများအတွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ၂၀၁၀အောက်တိုဘာ၎ရက်တွင် Adrian ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သော The Resistance Series ဇာတ်ကား
Adrian သည်သက်၂၃နှစ်ရွယ်တွင်နာမည်ကျော်Wire Image အပါအ၀င်တီဗီရှိုးပေါင်း၇ခုအတွက်ကော်ဇောနီလွင်ပြင်မှ ကမ္ဘာကျော်ဟောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်များကိုအင်တာဗျူးသည့် တီဗီသတင်းထောက်အဖြစ်၎င်း၊ တီဗီအစီအစဉ်မျိုးစုံတင်ဆက်သူအဖြစ်၎င်း၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း၄၀ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံဖြင့်၎င်း၊ အောင်မြင်မှုရရှိနေသည့်တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်ထုတ်လုပ်သူတဦးဖြစ်နေပါပြီ။
Adrian သည်မြန်မာစကားကိုသွက်လက်ပီသစွာပြောသော်လည်း အင်တာဗျူးကို ပထမမြန်မာ-အမေရိကန်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်များပါ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာအဓိကဖြင့်ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည်။
Please tell your Background…
My Ambition now is the same as when I was young, to be an Actor! There’s no other career or occupation I find myself at peace with other than being an actor, but it doesn’t mean I won’t do what I have to achieve what I want to.
Can you speak & write in Burmese? Have you ever watch Burmese Movie? What is your impression?
Yes, I’ve watched Burmese Videos, and I can see there’salot of room for growth. It would be nice to have an opprtunity to one day directaBurmese movie.
မြန်မာစကားကိုပိုပြောတတ်ချင်တယ်။အခု့ှဃ မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင် နေတယ်။ဘာသာစကားမျိုးစုံတတ်ထားရင်လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ပိုပြီးဆက်သွယ်လို့ရတယ်။
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားတယ် လို့အိပ်မက်မက်တယ်။ မြန်မာရုပ်ရှင်ဒါရိုက် တာတဦးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်သိထားတဲ့ ဟောလီးဝုဒ်ကအဆင့်မြင့်အတတ်ပညာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာပြည်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ှ့မေန လုပ်ချင်တယ်။
Are you doing Modeling?
I don’t think I have many since Acting is so much fun. But if I had to choose, I guess I would have Firearms, Sky diving, Bungee jumping and Motorcycles on my list of fun things to do. Watching Movies, Playing Music is more part of work than Hobby.
What TV Channels are your favorite?
Currently, I’mabig fan of AMC’s “The Walking Dead” and also TNT”s “South Land” but I love my Cartoons, “Family Guy” & “South Park”.
Any interest in Reading, and what are your favorite book?
Have you ever been to Burma for Vacation?
No, but I would love to go there to makeamovie more than going there on vacation. I’maWork-a-holic, and can’t stand not being productive.
Yes! I love Burmese food! My favorite is aMu;tdk;. Other than that I love Japanese Sushi, Rame, Vietnamese Pho, and Hotwings.
I am curently drivingaToyota Yaris. This is my favorite car, because I don’t need much to get around. Not very into Fancy Cars. Since its all about getting from one place to another in the most cost efficient. Since I drivealot to auditions, I can’t complain about the great gas milage. I think I would driveaYaris, Even I wasaMultimillionaire.
Comparatively, when it comes to Freedom, the heart of America has the most Freedom and it gets less as you move towards the cosat and to other countries.
For Example, Gun laws are more strict when you move towards the west, and illegal when you move to say Hawaii, or even more when you got to Japan.
The most fundamental freedoms of Self Preservation is stripped and compared to other countries I think that’s one of most essential ones I value.
The Weather of Los Angeles is hot all year round, it has beaches andapollution andalot of traffic, it’sacompromise.
I need one. Being one of the few Burmese Actors in the industry, there’s unfortunately not many people to seek advice from or help from. If they havealot to say, they also haveaof time and not much accomplishments. If they havealot of accomplishments, they rarely have time.
o&kyfaqmif Brad Pitt eJY Edward Norton wdkYu uRefawmfhudk Character t& Inspirational jzpfapygw,f/
Do you like Traveling? Where is your favorite city in USA & favorite countryin the world?
My favorite city in the USA? Probably Southern California for its Diversity in Food. But the compromise is that it’s too crowded.
For Favorite Country, it’s hard to say, Japan vs USA. But I like my Freedoms too much live out my years in Japan.
What kind of name brands you like in Fashion and Dress?
As for Fashion, I think it’s in the eye of the Beholder, and not the brand name. I wear Walmart or Target Clothing if I have to, but I were to getasuit, there’s only one place that fits me well and that’s “Express”.
What kind of Computer Note book are you using?
I can go on and on about How much I love Apple Computers and products. It gives me peace of mind, and because I’m notaprogrammer I have many heartaches with viruses using PC Computers that I will never willingly touchaPC Computer if I didn’t have to use it.
What is your experience in Burmese Thingyan Water festival in LA and your feeling?
It rang close to home, I feel like I got to discoveralittle bit about Who I was and my favorite part about it was the Food. I couldn’t stop eating, and I wish they had it more often so I can enjoy more of the authentic Burmese food. I hope one day I can beapart of the Festival too.
1. State Championship for Dramatic Interpretation. In Speech and Debate, I was standing next to5other Competitors, African-Americans, and Caucasians, and on the top of that, they were all taller than me. But it didn’t matter, because when it came to performance, this short Burmese Guy won the First place.
2. 2007 Emmy Award for Oustanding Broadband Drama. “Satacracy 88” was the name of the show, and I was convinced that Success wasn’t about Luck but about Hard Work and Making Happen Yourself.
Please tell some of the audition experience?
It’s neither glamorous, or exciting. If Acting was ever work, the Audition would be 99% of the unwanted process. And I personally dread it, hate it and prefer not to if I hadachoice.
In an Audition, you are treated likeanumber, waiting in line. It’s worst than the DMV. Because at least at the DMV, if you wait long enough, you get what you came for at the end of the line. At Auditions, you’re often set up for High Hopes andalot of Disappointment.
ဟောလီးဝုဒ်မှာအောင်မြင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အချိန်ကြာကြာကြိုးစားရမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ရမယ်။ အမြဲနှိမ့်ချထားရမယ်၊ အမြဲကြိုးစားလေ့ကျင့်နေရမယ်။ အချက်၃ချက်နဲ့ပြောရရင် ကိုယ့်ကို လူအများဆုံးသိနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။ ကိုယ့် ရဲ့ အရည်အချင်းကိုပြောပြရမယ်။ ကိုယ်
ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာပြောပြရမယ်။သူများကိုကူညီရမယ်။ တခါတလေမှာကိုယ့်အကျိုး ဘာမျှမရှိဘဲ အလကားလုပ်ပေးလိုက်ရတာတွေရှိတယ်။ ဒါဆိုရင်သူများ ကကိုယ့်ကိုသိသွားတယ်။ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်တယ်၊ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာသိသွားတယ်။တချိန်မှာအကျိုးရှိတာကိုယ်ကပြန်ခံစားရမှာပါ။
ကျွန်တော့်အသက်၁၃နှစ်ကနေ၂၆နှစ်အထိအေးဂျင့်မရှိပါဘူး။ ခုမှ အေးဂျင့်ထားပါတယ်။ အလုပ်တွေများလွန်းလို့အေးဂျင့်ကလုပ်ပေးနေရတယ်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ ဟောလီးဝုဒ်မှာ ဖွင့်တဲ့ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းတွေ တက်ဖို့လိုသလား၊
မလိုပါဘူး။ များသောအားဖြင့် ညာနေတာတွေများတယ်။ ဈေးကြီးတယ်။ ဒီသင်တန်း မျိုးကို စီးတီးကောလိပ်တွေမှာ တယူနစ်
ဂုဏ်ယူပါတယ်။မြန်မာကထူးခြားတယ်။ရှားပါးတယ်။ူငာငအနိ ဖြစ်တယ်။ ဟောလီး ၀ုဒ်မှာနာမည်ဆိုးမရှိသေးဘူး။ ဒါကြောင့်မြန်မာဆိုတာကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြောရဲတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဘာခက်သလဲဆိုတော့ မြန်မာကိုသိပ်မသိကြဘူး။မြန်မာလူမျိုးကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာ အရမ်းသတိထားရတယ်။ လူတွေကလူမျိုးတမျိုးကိုတပုံစံထဲအနေနဲ့မှတ်ထားပြီးဆက်ဆံတတ်တယ်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ တီဗီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ၊ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားဘို့ရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဘို့ရှိတယ်။ ကေဘယ်လ်တီဗီအတွက်တီဗီအစီအစဉ်တွေရိုက်ဘို့ရှိတယ်။
Speech and Debate ပြိုင်ပွဲအတွက်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက်ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာကနေ လုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာလာပြီးဟောပြောပေး
I forgot to mention, but this is really important to me. I currently runaProduction Company that does Commercials, Websites, Photography and Videopgraphy. If anyone ever needsacommercial shot, or Website, please check out my company’s Webpage:
Adrian…Thank you very much from Mandalay Gazette.
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာထုတ်တွင် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီး
ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ် သူ ကြီး
မေးစရာရှိတာ … အီးမေးနဲ့မေးကြပေတော့..။
အမေရိကန်အသံထွက်ကတော့ .. ရေဒီယိုကလွှင့်တဲ့ ..အမေရိကန်စစ်စစ်လေယူလေသိမ်းနဲ့ကို ..ပြောနိုင်တယ်..။
မှာ သွားကြည့်လို့ရှိရင် ပုံတွေ၊ ကလစ်တွေတော်တော်များများတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
ငါးနှစ်သားထဲက ရောက်လို့ ဘိုအစစ်လိုတော့ခ်နိုင်တာ မဆန်းဘူး ဒါပေမဲ့ အခုလို ထူးချွန်အောင်မြင်တာတော့ ဆန်းပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုAdrain…
စာလုံးပေါင်းအမှန်က SiFi မဟုတ်ဘူးလား၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားချန်နယ်လား။ )Adrian ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သော The Resistance Series ဇာတ်ကား
ဘိုအစစ်လိုတော့ခ်တယ်ဆိုတာထက်. အမေရိကန်လေယူလေသိမ်းနဲ့ .. ဘိုတွေနဲ့ပြိုင်ပြောနိုင်တာလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်..
.. SyFy အမှန်ပါ.။ ကေဘယ်မှာ အဲဒီချာနယ်ရှိတယ်..။
ဂုဏ်ယူပါတယ် မြန်မာဆိုလို့…. အရပ်ပုနေတယ်…:P
မြန်မာ သမိုင်းတွေ ပြန်ရိုက်နိုင်ရင်တော့ မဆိုးဘူးနော်.. ကျန်စစ်သား လူမင်း ရိုက်တာ သမိုင်းတောင် ပျက်ကရောဘဲ..
ဂုဏ်ယူပါတယ် မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်မှာ ဟိုအဆိုတော် မမကြီးလို လေမဟုတ်ပဲ တကယ်အော်စကာရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေဗျာ
၀မ်းသာစရာပါပဲဗျာ. ….. ငယ်ငယ်လေးကတည်းကရောက်သွားပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံကိုမမေ့တာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိလို့နေမှာ …. အောင်မြင်ပါစေ …. မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးပြုသော နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ပါစေ …
ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ မြန်မာတွေက တော်ပါတယ်လို့…စနစ်မကောင်းလို့သာ…..
ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ သူ့အကြောင်း အင်တာဗျူးတက်လာလို့ ရှေ့ ပြန်ပို့ ပေးလိုက်တာပါ..။
အင်တာဗျူးကို အဲဒီကလင့်ကနေ သွားဖတ်ကြပေတော့..။
ဧရာဝတီ Wednesday, 06 April 2011 01:38 အင်တာဗျူး
Adrian Zaw (ခ) ကြည်မော်ဇော်
ပြည်ပရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်တဦး၏ ဘ၀ကို သရုပ်ဖော် ရိုက်ကူးထားသည့် အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် အမေရိကန် ရောက် မြန်မာပြည်ဖွား Adrian Zaw (ခ) ကြည်မော်ဇော်က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကြားရတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ စာအုပ်နီလေးတွေလည်း သူ့ကြောင့် ဂုဏ်တက်ရတာပေါ့။ ၅နှစ်သားထဲက US ရောက်သွားပြီး မြန်မာစကားပြောနိုင်တာ၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တတ်သေးတာကလည်း ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။